I-Antigua neBarbuda Ubuzwe be-Antigua Harbour Island Residence Share
Ubuzwe base-Antigua neBarbuda ngezindawo zokuhlala e-Antigua Harbour Island
Ukutholwa kwesabelo sehhotela ukuthola ubuzwe be-Antigua neBarbuda
Ukubalekela kwakho eCaribbean Villa!
Edolobhaneni lokuvakasha elibukekayo laseJolly Harbour, ikhadi leposi linezindawo zethu zanamuhla, ezihlotshiswe kahle futhi ezihlomele ngokuphelele izindlu zokuziphilisa ezinamagumbi amabili. Ama-villas ethu anemibono ye-panoramic yamanzi nendawo enhle eluhlaza okotshani yamagquma azungezile. Ama-villas ethu yi-retreat ephelele futhi angayikhetha kakhulu imindeni, izimpelasonto, ama-honeymooners, izihambi zodwa noma abangane.
Izinkanyezi ezinhlanu zokungenisa izihambi
Ukunethezeka kwezivakashi zethu kubaluleke kakhulu kithi, ngakho-ke kusukela lapho ungena ezindaweni zokuhlala i-Harbour Island, uzozizwa uzolile futhi ukhululekile. Akukho lutho olungadingekile kithi.
IMIZUZU E5 HAMBA EBHISHINI
Ngokuhamba imizuzu emihlanu nje kuphela ufinyelela kwelinye lamabhishi angama-5 esiqhingini ... yebo, sinamabhishi angama-365. Futhi endaweni yaseJolly Harbour kukhona indawo enhle, engahloliwe eyi-365 km yeJolly Beach.
IZINDAWO ZOKUXHUMANISA IZINKANYEZI EZINKULU 5
Izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezingasolwandle, ezingajwayelekile nezinhle lapho ungajabulela khona i-cocktail yakho oyithandayo ngesikhathi sehora lokujabula nokushona kwelanga esiqhingini.